कहिले बन्ला पत्रेखोला पुल ? – News Portal
April 6, 2019 epradeshLeaveaComment on कहिले बन्ला पत्रेखोला पुल ?
दाङ, २३ चैत । दाङको तुलसीपुर–घोराही सडकखण्डमा पर्ने पत्रेखोलामा पुनः निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । दुई वर्षमा सक्नुपर्ने पुल निर्माणको काम भण्डै पाँच वर्ष पुग्दासम्म पुलका दुईवटा पिल्लर मात्रै ठड्याइएको छ ।
चार करोड १५ लाख रुपैयाँमा २०७१ साल भदौमा निर्माण सम्झौता गरिएको पुल निर्माणमा लापरवाही गरिएको छ । पुल निर्माणमा लापरवाही हुँदासमेत नियमन गर्ने निकाय मौन छ । शंकरमाली निर्माण सेवाले पुल निर्माणको जिम्मा पाएको छ ।
निर्माण कम्पनीले तीन वर्ष लगाएर दुईवटा पुलको लागि पिल्लर ठड्याए पनि पुलको अन्य काम पूरा गर्न सकेको छैन । पिलर बाहेकका सुपर स्ट्रकचर पाँच वर्षसम्ममा पनि पूरा गर्न सकेको छैन ।
निर्माणको सम्झौता गरेर बेस लेवलको डिजाइन कार्यालयले दिएको तर माथिल्लो निर्माणको डिजाइन पूरा गरेर नदिएका कारण निर्माण हुन नसकेको शंकरमाली निर्माण सेवाका प्रतिनिधि पदम शर्माले बताए ।
उनले सडक डिभिजन कार्यालयमा आफूले दुई पटक डिजाइन दिए पनि त्यो स्वीकृती नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको र काम गर्न नसकिएको भन्दै शर्माले डिजाइन दिएको दिनदेखि काम सुरु हुने बताए ।
उनले डिजाइन आएमा निर्माणको काम सुरु गर्ने र समयमै सक्ने दाबीसमेत गरे । शर्माले चार वर्षदेखि नबनेको घोराही–लमही सडकखण्डमा पर्ने कटुवाखोला पुल निर्माणमा तिब्रता दिएर पूरा गरेका छन् । भने घोराहीको चार लेन सडक पनि ८० प्रतिशत बढी काम गरेका छन् ।
दुई वर्षमा सक्नुपर्ने पुल निर्माणको काम भण्डै पाँच वर्ष पुग्दासम्म पुलका दुईवटा पिल्लर मात्रै ठड्याइएको छ ।
तर पत्रेखोलाको पुल निर्माणमा भने शर्माले चासो नदिएको डिभिजन सडक कार्यालय दाङले जनाएको छ । कार्यालयकी साइड इन्जिनियर क्षितिज पोख्रेलले पत्रेखोलामा पुल निर्माण योजनाको बेसलाइन काम पूरा भएको र सुपर स्टकचर निर्माणका लागि डिजाइन नहुँदा ढिलासुस्ती भएको बताइन् ।
दुई वर्षमा सक्ने गरी सम्झौता भएको र त्यहि बीचमा निर्माण कम्पनीले सुपर स्ट्रचरको डिजाइन तयार पारेर सडकको स्वीकृतिमा काम गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीले डिजाइन कार्यालयमा नबुझाएको बताइन् । एक पटक डिजाइन आएको थियो, हामीले केही संशोधन गरेर ल्याउनुहोस् भनेर दियाँै त्यसपछि डिजाइन आएको छैन इन्जिनियर पोख्रेलले भनिन्,
पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काम हुन सकेको छैन । डिजाइनमा केही त्रुटी देखिएको र त्यसलाई सच्याएर निर्माण गर्नुपर्नेमा ढिला भइरहेको डिभिजन प्रमुख बद्रिप्रसाद शर्माले बताए । शर्माले जिल्लामा निर्माण सुरु भएका योजनाहरुको निर्माणमा ताकेता गरिरहेको भए पनि केही अहिलेसम्ममा पनि अधूरै रहेको बताए । कति ठेक्काहरु तोडेर जरिवाना तिराएको उनले बताए ।
जिल्लामा काम नगर्ने निर्माण ब्यवसायीहरुलाई निगरानी राखेर ८८ लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत चालु वर्षमा संकलन गरेको शर्माले बताए ।
निर्माण व्यवसायीहरुको लापरवाहीले विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती भइरहेको भन्दै केही समय अघि जिल्लाका २७ निर्माण व्यवसायीलाई निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै प्रशासनले कारवाहीको तयारी गरेपछि र केही निर्माणका योजनाहरु पूरा भए पनि त्यतिबेलाको अधूरैै देखिएको पत्रेखोला पुल भने अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।